Inona no dikan'ny volana janoary: vato nahaterahana janoary, famantarana zodiak, voninkazo, isa ary maro hafa! - - Hevitry Ny Tandindona
Inona no dikan'ny Janoary? Vato fahaterahana volana janoary, famantarana zodiaka, voninkazo, isa ary maro hafa!
Inona no dikan'ny Janoary?
Vato fahaterahana volana janoary, famantarana zodiaka, voninkazo, isa ary maro hafa!
Amin'ny volana voalohany amin'ny taona vaovao dia mitazona fanantenana betsaka ho an'ny olona ny volana Janoary (hoy izy, tsy misy tsindry). Ny olona manerantany dia manomboka mieritreritra ny fanapahan-kevitr'izy ireo, ny vinavinany ary ny drafitra vaovao - antenain'izy ireo fa tsara kokoa noho ny tamin'ny taona lasa.
Raha miresaka ara-panahy, ny volana Janoary dia manamarika fotoana iray hanavaozana sy fanombohana vaovao. Ny olombelona dia manana fahazaran-dratsy mahatsiravina amin'ny fitondrana zavatra manodidina ny lasa, fihetsem-po amin'ny ankapobeny, izay tena mitarika antsika hidina. Tsy afaka mandray zavatra vaovao ianao raha tsy mamoaka ireo endrika eritreritra taloha, efa lany andro ary tsy salama.
Hevitra iray manampy amin'ny fanombohana ny zon'ny Taom-baovao ny fampiasana fanamafisana mitovy amin'ny fanapahan-kevitra. Manorata tanjona vitsivitsy manokana tianao hahatongavana amin'izany taona izany ary resaho mafy amin'ny feta feno izy ireo. Ohatra, raha voan'ny aretina matetika ianao tamin'ny taona lasa, ny fanamafisanao dia mety hoe 'Salama aho.' Ny hakanton'ny fanamafisana dia ny fampifantohan'izy ireo ny sainao sy ny fonao amin'izany tanjona izany, izay midika fa handinika bebe kokoa azy ianao mandritra ny taona. Amin'ity tranga ity, ny fihinanana sakafo tsara kokoa, ny torimaso mafy ary ny fanatanjahan-tena dia mety hiseho ho azy!
Volana faharoa amin'ny Ririnina ny volana Janoary. Izy io matetika no volana mangatsiaka indrindra indrindra amin'ny hemisphere avaratra ary mafana indrindra any amin'ny hemisphere atsimo (toerana fahavaratra izany).
Ny volana janoary dia nomena anarana taorian'ny Andriamanitra Romana, Janus izay manara-maso ny fidirana sy ny vavahady ary ny fidirana hafa mitovy amin'izany. Manana endrika roa i Janus - ny iray manatrika ny iray ary ny iray mijery any aoriana. Ity dia sary mety indrindra amin'ny volana Janoary raha jerena ny fifantohanay misaintsaina momba izay efa teo aloha, sy izay mbola ho avy Taombaovao.
Ny angano sy ny angano dia milaza fa hitan'i Janus avokoa ny lasa sy ny hoavintsika rehetra. Mampientam-po sy mitaona fanahy izany. Ny fiaraha-miasa amin'ny angovo Janoary dia mandrisika ny fahafahantsika mahita ny tena fahaizantsika manokana ary manomboka mampihetsika izany isan'andro.
Amin'ny fomba fijery metafizika dia manampy antsika i Janus ho 'tsy tafahitsoka'. Efa nahatsapa ho toy ny mijery rindrina ve ianao na mijoro eo am-baravarana ary mandondona nefa tsy misy zavatra mitranga? Ny volana janoary no volana ahafahan'ireo vato misakana manomboka manjavona.
Vato nahaterahana volana janoary: Garnet
Ny anaran'i Garnet dia avy amin'ny teny latina izay midika hoe toy ny voa. Ity fikambanana ity dia toa mifandraika indrindra amin'ny volana Janoary amin'ny ezaka rehetra ho an'ny fanombohana vaovao. Ny Garnet dia matetika amin'ny loko mena isan-karazany, loko misy ifandraisany singa afo ary izany dia mampatsiahy antsika ny fahaterahan'ny masoandro indray any an-danitra.
Ny antitra dia nanohana an'i Garnet ho an'ny talismans sy ny agimat. Nino izy ireo fa tsy niaro ilay mpitondra fotsiny fa nanampy azy ireo koa fanasitranana . Metaphysically Garnet dia mitaona ny famoronana, ny fanaovana ny marina, ny finoana ary ny filan'ny nofo.
Ireo mpiasa maivana sy mpitsabo dia mino fa ny toetra ara-batana ao Garnet dia misy ny fampihenana ny poizina, ny fifandanjana angovo ary ny fanatsarana ny fahafahan'ny vatana mampiasa vitamina amin'ny fomba mahomby. Garnet mampihetsi-po mampitony, manokatra ny Heart Chakra (sady mandanjalanja ny Chakra hafa rehetra) ary manome herim-po. Ny fitondrana Garnet amin'ny ankapobeny dia mitondra vintana sy fahombiazana amin'ny asa aman-draharaha.
Famantarana Zodiac Janoary: Capricorn sy Aquarius
Manomboka amin'ny mariky ny Capricorn (ny osy an-dranomasina) ho toeram-piarovana manomboka amin'ny Desambra. Ity mari-pamantarana ity dia mijanona hatramin'ny faha-20 rehefa Aquarius (ny mpitondra rano) dia manomboka. Andao hojerentsika fohy ireo famantarana fahaterahana roa ireo.
Ny singa Capricorn dia eto an-tany ary ny planeta Saturn. Capricorn no mahatratra ny Zodiac. Ireo olona be zotom-po ireo dia mitaona ny fankafizan'ny namana sy ny fianakaviana azy ireo noho ny faharetany sy ny fikirizany.
Ny fanamby lehibe indrindra ho an'i Capricorn dia ny mampifandanja ny asa sy ny fiainana / lalao sosialy. Ny fifantohan'izy ireo dia mirona hifikitra mafy amin'ny fe-potoana farany sy ny fatra-paniry laza, izay matetika miteraka fifandonana ara-pientanam-po (sy ny tsy fahampian'ny fikarakaran-tena). Soa ihany, rehefa nahazo aingam-panahy, Capricorn dia afaka mahita fomba tena mahomby amin'ny ezaka sy ny fifandraisany amin'ny orinasa.
lalao tsara ve i leos sy sagittarius
Raha mitady namana manana fahaiza-manao eo amin'ny fandaminana lehibe ianao, hatsikana mahatsikaiky ary fanomezana iray hanentanana ny hafa, Capricorn no sonia ataonao.
Amin'ny Fampitahana, i Aquarius dia tarihin'ny singa ny Air ary ny planeta Uranus. Aquarians no niavian'ny Zodiac. Mampientanentana ny hafa ny fiheveran'izy ireo manokana ny fiainana andavanandro.
Aquarians dia mpivarotra fironana, na an-tsitrapo na tsia. Ireo olona ireo dia manana fahatsapana andraikitra lehibe ary malala-tanana amin'ny lesoka. Mandritra ny fotoana maha-eny amin'ny lanitra an'io famantarana io dia ho hitanao ny tsy firaharahianao ankapobeny ny fironana sy ny fomba farany. Tian'ny Aquarians ny mamoaka ny lalan'izy ireo amin'ny panache.
Ny fanamby ho an'ny mpitondra rano dia tonga amin'ny endrika mahery indrindra. Matetika ny lohan'izy ireo sy ny fony dia miady amin'ny fahefana fara tampony. Manampia toetra voajanahary sy fiantsoana olona ity, ary mety ho henjana ny mitazona an'io rano ao anaty siny io!
Raha mila namana tsy mpifanaraka amin'ny saina mamirapiratra sy fikasihan-tanana ianao, dia mitadiava Aquarius.
Ny janoary dia manana fialantsasatra maro. Ny volana iray manontolo dia natokana ho an'ny fahatsiarovan-tena isan-karazany toy ny lanjany ara-pahasalamana, fiankinan-doha ary Alzheimer. Fanampin'izany, ity dia National Mentoring Month, volana dite mafana ary volana lasopy any Etazonia.
Ny andro 12 amin'ny Noely dia mifarana amin'ny 5 Janoary. Raha mitady fialantsasatra hafa isan-karazany ianao hankalazana ny momba ny andro Fiksi amin'ny siansa nasionaly (2 Janoary), Andro manerantany ho an'ny Braille (4 Janoary), Andro saosisy any UK (5 Janoary), Andro Befana any Italia (6 Janoary), Tanora Nasionaly Andro any India (12 Janoary) na Andro Wikipedia (16 Janoary).
Mbola tsy vita isika! Fetim-pirenena ho an'ny fahalalahana ara-pinoana (16 Janoary), Andro Popcorn (19 Janoary), Fetin'ny fehim-pirenena (22 Janoary) ary ny Fetin'ny vadin'ny fiadanantsika (24 Janoary) dia atao amin'ny tapaky ny volana faha-2. Aza hadino izany, lisitra fohy fohifohy io.
Voninkazo Janoary: Fetin'ny carnation
Ny tantara dia mandoko ny Fetibe amin'ny maha-vonin'ny finoana, fahadiovana, fahatsapana ary fahatsiarovana. Toy ny voninkazo iray manana fakany taloha niverina 2 000 taona ny olombelona dia nahita fampiasana an'io voninkazo mahafinaritra io. Ny zava-pisotro misy Carnation dia anisan'ny kitapitr'ilay mpanasitrana noho ny alahelo. Io toetra io dia azo antoka fa ara-potoana raha jerena ny isan'ny olona mahita ny tenany fa manana trangan'aretina manga amin'ny ririnina. Anaram-bahoaka hafa ho an'ny Carnation dia ahitana ny voninkazo Gilliflower sy Jove.
Misy ny adihevitra momba ny toerana niavian'ny Carnation ny anarany. Ny sasany mino fa avy amin'ny 'corone', izay karazam-boninkazo. Raha tsy izany dia mety ho avy any Gresy izy io izay ny Carnations dia ampahany amin'ny satroboninahitry ny fombafomba. Ny mety fahatelo dia ny teny amin'ny latina, izay midika hoe 'nofo'. Ity fanondroana ity dia mihatra amin'ny loko mavokely malefaka amin'ny Carnation amin'izao fotoana izao eo amin'ny tantara.
Metaphysically Carnation mifanaraka amin'ny Singa afo sy ny masoandro. Ny fampiasana matetika indrindra ny voninkazo dia ny ozona fiarovana, fombafomba na talismans. Ankoatr'izany, ny Carnation dia manala ny angovo miiba ary manome fiarovana ankapobeny.
Volana volana janoary: 1
Ao amin'ny fandinihana ny , Volana volana Janoary isa 1 dia tena zava-dehibe. Ny 1 dia maneho ny famoronana - ny vato fehizoro amoron'ireo isa hafa.
ny ny isa 1 dia miasa ary feno potentika. Misy angovo mahery vaika ho an'ny tanjon'ny fiainantsika amin'ny 1. Ity hery ity dia mamindra ny sakana tsy hivoaka amin'ny alàlan'ny finiavana tanteraka.
Ity tarehimarika ity dia manomboka fihodinan'ny fanovana izay maharitra sy amin'ny 'vanim-potoana tsara'. Manolotra fomba fijery tsotra amin'ny fiainana mainty sy fotsy izy io. 1 dia pragmatika, mahaleo tena ary maditra. Ny fahazotoana 1 dia tsy mahazaka ny tsy fahamarinana na fihatsarambelatsihy.
Ireto fihetsiketsehana rehetra ireto dia mendrika hodinihina rehefa manomana ny herin'ny mazika amin'ny volana Janoary.
Janoary Loko: White & Sky Blue
Ny loko lehibe mifandraika amin'ny volana Janoary dia tena mangatsiaka fotsy . Raha tsy izany, misy olona manisy lanezy manga hatsangana ho safidy. Ny fotsy dia loko madio izay maneho ny zanatsika anatiny, fahamendrehana, fahamendrehana, fiarovana ary fehin-kevitra. Mampahatsiahy antsika ity fifanoratana ity fa na dia nifarana aza ny tsingerintaona iray dia misy fiandohana vaovao miaraka amintsika.
White mitondra fiadanam-po sy filaminana. Ity dia vato madio miandry ny penina ohabolanao. Mitondrà fotsy bebe kokoa amin'ny fiainanao rehefa te hanomboka zavatra vaovao sy vaovao ianao. Ny fanaovana fotsy dia mamporisika ihany koa hanome feo ny toetran'ny tanora ao anatiny (ilay mahatadidy ny fomba filalaovana). Ny accents fotsy dia fanampiny tsara ao an-trano rehefa mandamina indray ianao ary mamorona tontolo salama.
Symbol Janoary: Birch
ny Kalandrie celtic ahitana hazo ho tandindona manan-danja. Ity rafitra ity dia manondro ny vanim-potoana hatramin'ny 1 Janoary ka hatramin'ny faha-20 hatramin'ny hazo Birch. Birch dia matanjaka tokoa ary afaka miatrika loza eo amin'ny tarehy. Amin'ny natiora raha may ny ala dia i Birch no velona voalohany. Io tanjaky ny tanjona io dia hita taratra tsara amin'ny volana Janoary.
Ny mpamosavy dia mampiasa Birch amin'ny famosaviana ho famoronana, fanasitranana, fiarovana ary fiterahana. Raha mamatotra kofehy mena eo am-pototry ny hazo Birch amin'ny fanananao ianao dia miaro ny taninao amin'ny majika bontolo sy ny negativa izany. Matetika ny razana dia nametraka rantsankazo Birch nanodidina ny fihinanam-bilon-jaza mba hiarovana amin'ny fahavoazana mihoatra ny natiora. Rehefa vita anaty taratasy izy, Birch dia ankasitrahana ho toy ny fototry ny Book of Shadows.
Ireo teraka nandritra io vanim-potoana io dia tena mazoto ary manome an'io angovo tsara io ho an'ny olona rehetra manodidina azy. Hitanareo foana ny fahafaha-manao amin'ny olona sy ny toe-javatra ary mahatratra izany tanjona izany. Amin'ny toe-javatra sarotra ianao dia tonga amin'ny tsy fahasalamana. Ny olona Birch dia manao mpitarika mahay satria mieritreritra amin'ny tongony izy ireo ary manintona ny firazanany.
aquarius lehilahy sy pisces vehivavy mafana
Raha manomboka mahita hazo Birch betsaka amin'ny fiainanao isan'andro ianao dia hafatra fanavaozana izany. Fotoana izao handrosoana ary ho tonga mpisava lalana amin'ny dian'ny fanahintsika. Manana ny hery anaty ianao amin'izany, ary amin'izany ny farany manome anao ny fitoniana tadiavinao.
Volana Volana Janoary
Ny Volana Feno amin'ny volana Janoary dia fantatra amin'ny anarana iraisana telo: Wolf Moon, Hunger Moon ary Cold Moon. Raha sendra manana ianao Wolf Totem na Spirit Animal, ity dia fotoana mety indrindra hanomezam-boninahitra an'io angovo io amin'ny fiainanao ary hanavao ny fifandraisanao amin'ilay fanahy.
Ny fampifangaroana ny Full Moon Symbolism amin'ny herin'ny volana Janoary, fotoana tsara izao handaminana ny toerana masin'ny trano. Fenoy sakafo amin'ny stock ny pantry (ho an'ny volana 'hanoanana'). Ataovy mafana sy mandray azy io. Mipetraha ary mankafy fotsiny ny majika fialan-tsasatra.
Ny fombafomba amin'ny Volana Volana Janoary dia mety ho iray amin'ny fametrahana ny fikasanao ho azy ireo volana ho avy. Aza mandeha ambonimbony eto. Tazomy ny tanjonao mba tsy ho kivy ianao.
Ny volana janoary effets dia fiovan'ny vanim-potoana amin'ny sandan'ny tahiry, matetika ny vidiny avo kokoa noho ny teo aloha, amin'ny ankamaroany amin'ny kapila kely. Ity rallye ity dia manaraka ny iray volana amin'ny fanodinana tombam-barotra amin'ny fivarotana tahiry. Ny mpampiasa vola hafa mety mampiasa bonus sns hanamafisana ny fahaizany mividy.
Ny ligin'ny firenena dia nanomboka tamin'ny 10 Janoary 1920.
I Utah no firenena fanjakana faha-45 an'i Amerika tamin'ny 4 Janoary 1896. New Mexico no faha-47 tamin'ny 6 Janoary 1912.
Abraham Lincoln dia namoaka ny Fanambarana Emancipation tamin'ny 1 Janoary 1863.
Milalao Shakespearean roa no manonona ny volana Janoary: Winter's Tale sy Many Ado momba ny Nothing.
Ny tahan'ny fisaraham-panambadiana dia avo kokoa amin'ny volana Janoary noho ny volana hafa rehetra.
Henry Ford dia nanolotra ny laharan'ny fivoriambe tamin'ny Janoary 1914.
Nanomboka tamin'ny Janoary 1933 ny Holocaust.
Roe vs. Wade dia voamarina tamin'ny Janoary 1973.
Nahita volamena tany California ireo mpitrandraka tamin'ny Janoary 1848.
Nipoaka ny fiaramanidina Challenger, Janoary 1986.
Manomboka amin'ny Janoary 45 al.fi ny Kalandrie Julian.
Ny fifidianana filoham-pirenena voalohany dia natao tany Etazonia, Janoary 1789.
Teny nalaina tamin'ny Janoary
'Tsy mbola nisy olona nahita fahasalamana ara-bola tamin'ny famahana ny volana janoary, izay nilaozan'ny volana feb.' ~ Suze Orman
'Volana janoary foana ho an'ny toe-karena ara-toekarena amin'ny fitondran-tena: zavatra vitsivitsy no maneho fifehezan-tena mazava toy ny fanapahan-kevitry ny taom-baovao. Mbola tsara kokoa noho izany aza ny volana febuari, satria mamela antsika hianatra ny antony mahatonga ny maro amin'ireo fanapahan-kevitra ireo no tapaka. ' ~ Sendhil Mullainathan
'Tonga ny volana Janoary, miaraka amin'ny maso izay mamirapiratra tokoa, mpiady mailaka fanala, mitaingina lanezy amin'ny aloky ny lanezy.' ~ Edgar Fawcett
'Ny andro fohy indrindra dia lasa, ary na inona na inona toetr'andro tsy andrintsika amin'ny volana Janoary sy Febroary, farafaharatsiny dia tsikaritray fa mihalava kokoa ireo andro. Minitra isa-minitra dia mihalava izy ireo. Afaka herinandro vitsivitsy vao fantatsika ny fanovana. Tsy takatry ny saina izany na dia amin'ny fitomboan'ny zaza aza, rehefa jerena isan'andro isan'andro, mandra-pahatongan'ny fotoana hanombohana fahagagana faly dia tsapanay fa afaka mijanona ivelan'ny varavarana amin'ny takariva isika maharitra mandritra ny ampahefatry ny ora sarobidy iray hafa. . ' ~ Vita Sackville-Andrefana
'Janoary no volana mangina indrindra ao amin'ny zaridaina. … Fa ny hoe satria mangina fotsiny dia tsy midika hoe tsy misy na inona na inona mitranga. Ny tany, misokatra ho an'ny lanitra, dia mifoka ny rotsakorana madio raha ny zavamiaina bitika kosa dia mamadika ny vilona any ambanin'ny tany ho lasa otrikaina azo ampiasaina amin'ny voly zavamaniry manaraka. Ny tionelina dia manafangaro ny tany ary manomana azy handray ny voa sy ny fakany ho avy. ' ~ Rosalie Muller Wright
'Misy fizarazaran-taona roa afaka manamaivana ny kaikitry ny ririnina rehetra. Ny iray dia ny fanalefahana amin'ny volana Janoary. Ny iray kosa dia ny katalaogin-kazo. ' ~ Borland zavatra
'Ny volana Janoary kely dia nipaoka ny varavarako androany.
Ary hoy izy: Tafio ny lambanareo amin'ny ririnina,
Ary mivoaka any ivelany hilalao. '
Feno fahafinaretana foana;
Mandra-pilentiky ny masoandro.
Hijanona iray volana miaraka amiko
Ary hanana fotoam-pifaliana toy izany isika -
Tongava fotsiny dia jereo. ' ~ Winifred C. Marshall
'Ny mamaky tononkalo amin'ny volana Janoary dia tsara toy ny mandeha mitsangatsangana amin'ny volana Jona.' ~ Jean-Paul Sartre
'Ny lehilahy rehetra dia tokony hateraka indray amin'ny andro voalohan'ny volana Janoary. Atombohy amin'ny pejy vaovao. Makà lavaka iray hafa ao anaty siny raha ilaina, na avelao hidina ny iray, arakaraka ny toe-javatra; fa amin'ny andro voalohany amin'ny volana Janoary dia avelao ny olona samy hisikina indray, miaraka amin'ny tarehiny eo aloha, ary aza liana amin'ny zavatra taloha sy taloha. ' ~ Henry Ward Beecher
Janoary fitsingerenan'ny andro nahaterahana
Betsy Ross - 1/1
Isaac Asimove - 1/2
Joan of Arc - 1/6
Sales Soupy sy Elvis Presley - 1/8
Howard Stern - 1/12
Martin Luther King Jr. - 1/15
Benjamin Franklin sy Mohammad Ali - 1/17
Edgar Allen Poe - 1/19
Buzz Aldrin - 1/20
John Hancock - 1/23
Ellen DeGeneres - 1/26
Lewis Carroll - 1/27
Alan Alda - 1/28
Oprah Winfrey - 1/29
Jackie Robinson - 1/31
fampifangaroana ny lehilahy sy ny homamiadan'ny vehivavy
leo lehilahy libra vehivavy eo am-pandriana
scorpio lehilahy sy vehivavy scorpio eo am-pandriana
planeta iza no akaiky indrindra an'izao tontolo izao